काठमाडौँ : कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकार आफै आइसोलेसनमा भएकाले अब केहि गर्न नसक्ने बताएका छन् । थापाले अब सरकारले संक्र’मितको संख्या गन्ने कामबाहेक केही गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय आएसँगै थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । थापाले लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय ‘कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नू !’
यसरी हरेक दिन खुद्रा’खुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस् ‘सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उप’रान्त सं’क्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरो’ना महामा’रीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले अब विपन्न, अश’क्तलगायतको मात्र परी’क्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबे’होर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जा’नकारी गराएका थिए ।
विज्ञहरूले भने महामारीका बेला को’भिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् ।
Previous जसपाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघिय परिषद अध्यक्षमा नियुक्त गर्याे…हेर्नुहोस् ।
Next माछा सँग झुकिएर पनि नखानुहोस् यो चिज,स्वास्थ्यका लागी हुनेछ वि’ष सरह हुन्छ…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।